> Resource > Free > Top 5 Best Free MPEG Video Joiners
Video ku biiro waa qayb muhiim ah ee video tafatirka. Waxaa jira tiro ka mid ah software in aad isticmaali karto si ay u gaaraan ku salaysayn khalkhalgelinta ee files aad sidan. Hoos waxaa ku qoran shan ka mid ah kuwa ugu caansan joiners MPEG Video.
Tani waa freeware video ah soo biiray in ay sidoo kale u dhaqmo sida gui ka mid ah qalabka kale ee sida flvtool iyo MpgTx taasoo wax ka qaban shaqo video tafatirka ee software-ka ah. Software aad awood u kala faylasha sida kuwa la qaabab wmv, dhexena, Mpg iyo FLV ka dibna dib u wada biiro. Waxay bixisaa badan oo tuuryo keyboard.
Waxay bixiyaan howlaha degdeg ah ku xiran tahay tirada file;
Waxaa laga yaabaa in la iman looga baahan yahay nidaam aad u leedahay in Windows Media Player.
Tani software free ku biiro taageertaa qaabab sida MPEG-1, MPEG2, wmv, MP3, AVI, OGG, regelingen iyo WMA. Ku biirista files waa sida ugu fudud ee iyaga xulashada ee isku xigxiga iyo xulashada nooca warbaahinta iyo sidoo kale wax soo saarka qaab. Dhammaan markaas waxaad u baahan tahay inaad samayso waa in la qeexo codecs riixo ama ku xidhan tahay baahida aad profiles video.
Waxay bixiyaan xal u ku biiro audio iyo video files;
Miyuu ah interface user fudud.
Ma shaqayn karaa Windows 7 iyo Vista.
Faylal ay si fudud loo kala qeybin karaa iyo qaybo, diray internet-ka ka dibna ka dib mar kale ku biiray. Waxaa sidoo kale laga heli karaa versions kale si loogu isticmaalo OS sida Mac iyo Linus. Sidaa awgeed, xitaa haddii aad kala qaybsan tahay faylka on a mashiinada Windows, waxaad ka heli kartaa si ay u soo biiraan Mac ah. File 10GB A waxaa loo kala qeybin karaa qaybo 600MB.
Video qalabeed uu leeyahay qalab video yaab leh oo waa freeware internetka. Si aad u isticmaasho qalabka ku salaysayn khalkhalgelinta aad video files, waxaad u baahan doontaa inaad iska diiwaangeliso. Waxaad isticmaali kartaa URL ah loogu xiro faylasha ama geliyaan kaliya ka disk adag. Markaas si fudud aad ku biiri kartaa videos wada.
Easy in ay raacaan Casharrada video sidii ay kuugu toosin.
Haddii aad rabto in aan kala tagno faylasha aad, waxa uu helo si fudud sida aad si fudud u baahan tahay in ay doortaan faylka, dhigay duwan timmaha iyo shidda oo aad diyaar u tahay in ay tagaan. In laga guurayo ee files, aad leedahay fursado badan oo haddii aad u baahan tahay in la beddelo labada baaxadda iyo sidoo kale qaab ka mid ah wax soo saarka.
Haddii aad u baahan tahay xirfad dheeraad ah MPEG video joiner ah, Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) si weyn lagu talinayaa. Ayaa shaqada goynta video awood badan kuu ogolaanaya in aad ku biiri oo dhan qaabab video caan ah oo ay ka mid yihiin MPEG video files. Ka sokow, waxa kale oo aad codsan kartaa saamaynta video dheeraad ah oo aad jeceshahay.